Cryptohopper - Mụta ahia 2
Ihe nkpu Review
€ 20 kacha nta ego
Cryptohopper bụ ụlọ ọrụ na-eto eto nke dị n'isi na Netherlands.
kacha nta ego € 20
Cryptohopper bụ ụlọ ọrụ na-eto eto nke dị n'isi na Netherlands. Companylọ ọrụ a bụ nke Cryptohopper BV. Companylọ ọrụ ahụ na-enye ọtụtụ ngwaọrụ na-enyere ndị ahịa aka ị nweta nsonaazụ kacha mma. Dabere na Crunchbase, ụlọ ọrụ ahụ emebeghị ego ọ bụla na-esite n'aka ndị na-etinye ego.
N'ajụjụ ọnụ Forbes gbara ụmụnna ahụ, ha kwuru maka otu ha siri nwee ike ibido ma bulie ụlọ ọrụ ahụ naanị with 2,000. Ndị otu Cryptohopper nwere ike iji ọtụtụ ngwaọrụ ụlọ ọrụ na-enye. Ha nwekwara ike ịzụta ngwaọrụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ahụ n'ọma ahịa. Ndị mmepe si gburugburu ụwa nwere ike iji ahịa were ree ngwa ahịa ha.
Ọ dị mfe iji - Emebere ikpo okwu weebụ nke ọma, na-eme ka ọ dị mfe ịnyagharịa na iji ya.
Ndakọrịta - Cryptohopper na-eji ụdị API. Dịka, ọ dakọtara na ihe karịrị 10 mgbanwe crypto.
Ọtụtụ narị ngwaọrụ - Cryptohopper's n'ọma ahịa nwere ọtụtụ narị ngwaọrụ. Ndị ọrụ nwere ike ịgụ nyocha site n'aka ndị ọrụ gara aga.
Nkuzi - Cryptohopper na-enye ọbá akwụkwọ zuru ezu nke nkuzi na otutu isiokwu.
Mmemme mgbakwunye - Thelọ ọrụ ahụ nwere mmemme mgbakwunye ebe ndị ọrụ nwere ike ị nweta ọrụ maka ntinye aka niile.
Amaghi otutu ihe omuma banyere ndi guzobere ya.
Oge ikpe nke ụbọchị 7 dị mkpụmkpụ.
Cryptohopper enweghị nọmba ekwentị raara onwe ya nye.
Cryptohopper bot nwere ọtụtụ atụmatụ nke niile na-enyere ndị ahịa aka inweta nsonaazụ ka mma. Ihe ndị bụ isi bụ:
Ahịa akpaaka bụ otu n'ime echiche ndị kachasị ewu ewu na Wall Street. Ọ bụ echiche na-enye ndị ahịa ohere imeghe ma mechie ahịa na-akpaghị aka mgbe ụfọdụ pàtara. Site n'iji algọridim, ndị ahịa na-enwe ike ịme ahịa ọbụna mgbe ha anaghị ere onwe ha. Bot nke Cryptohopper nwere ike ibido ahia n'uzo di nma.
Mgbanwe ahia na ahịa
Cryptohopper nwere njikọta na ihe kariri 70 mgbanwe ahia. Dị ka ọ na-adịkarị, ọnụahịa nke cryptocurrencies abụghị otu gafee mgbanwe. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ mgbanwe nwere ike ree BTC maka $ 7,200 ebe onye ọzọ na-ere ya $ 7,100. Ya mere, bot ahụ nwere ike inyere gị aka iji ọdịiche ọnụahịa dị iche iche a wee nyere gị aka inweta ezigbo ọnụahịa.
Ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-enweta ego n'ime ha ahịa Nweta. Ha na-erite uru site na mgbasa n'etiti oku ahụ ma jụọ ọnụahịa nke akụ. The Cryptohopper bot nwere ọtụtụ ahịa na-eme nhazi nke ga-enyere gị aka inweta ihe kacha mma.
Mirror trading bụ a trading atụmatụ na-enye ohere ahịa ịzụta pụtara azum. Nke a na-eme ka ndị ahịa na-enweghị uche nwee ike iji ahụmịhe nke ndị ọkachamara na-azụ ahịa.
Ọnwụ nkwụsị bụ ngwá ọrụ dị mkpa n'ahịa. Ngwaọrụ na - akwụsị azụmaahịa na - efu ọnwụ ma na - egbochi ya ịmefu ọtụtụ ihe. Ọnwụ nkwụsị nwere ụfọdụ ndọghachi azụ n'ihi na anaghị ejide uru. Ngwá ọrụ ka mma, nke a na-enye Cryptohopper bụ nkwụsị trailing. Nkwụsị a na-ewe uru ma belata ohere nke nnukwu ihe egwu na ntụgharị.
Akwụkwọ ahia a makwaara dị ka ngosi ahịa. Ọ na-enye gị ohere ịzụ ahịa na-abụ abụ data ahịa na-eji ego nkịtị. Ngwaọrụ a dị mkpa maka ndị ahịa na-amalite amalite n'ahịa. O nwekwara a backtesting ngwá ọrụ nke ahụ na-enye gị data akụkọ ihe mere eme iji nwalee usoro gị.
Mgbanwe nke Cryptohopper na-akwado
Cryptohopper na-akwado ụfọdụ ndị kasị ewu ewu cryptocurrency mgbanwe. Fọdụ mgbanwe ndị a bụ Huobi, Kraken, Binance, Coinbase, na Poloniex na ndị ọzọ. N'okpuru bụ ụfọdụ n'ime mgbanwe ndị a na oge ọrụ ha.
Ptonye ọnụahịa Cryptohopper
Cryptohopper na-akpata ego n'ụzọ abụọ. Nke mbụ, ọ na-akpata ego site na nchịkọta ndenye aha ọ na-enye. Nke abụọ, ọ na-ewepụkwa ire ire ngwa ahịa n'ahịa. Ndị na-ere ngwá ọrụ n'ọma ahịa bụ ọrụ maka iwepụta ezigbo ego nke ngwa ọrụ ha. Cryptohopper nwere nchịkọta anọ. Nchịkọta ndị a bụ:
Ngwunye Ọsụ .zọ
Ọsụ ụzọ bụ ngwugwu nke ezubere iche maka ndị ahịa mbido. Ihe ngwugwu anaghị akwụ ụgwọ maka ụbọchị asaa. N'ụbọchị asaa ahụ, ndị ahịa nwere ikike ibido ọnọdụ 80, ihe kachasị nke 2 na-akpata, 1 simed trading bot, na nke kachasị nke mkpụrụ ego 15 ahọpụtara.
Ihe ngwugwu Explorer
Ihe ngwungwu a yiri nke ngwugwu Ọsụ .zọ. Nanị ihe dị iche bụ na ngwugwu na-akwụ $ 16.58 ụgwọ kwa ọnwa mgbe a na-akwụ ụgwọ kwa afọ yana $ 19 mgbe a na-akwụ ụgwọ kwa ọnwa. Ọtụtụ oge, ndị debanyere aha ọsụ ụzọ na-aga na Explorer mgbe oge ikpe ha gwụchara.
Ihe ngwugwu njem a yiri ngwugwu onye nyocha. Ihe dị iche bụ na ọnụ ọgụgụ nke ọnọdụ abawanyela na 200. Ihe nrịbawanye kachasị na-abawanye na 5 ma ọnụ ọgụgụ mkpụrụ ego abawanyela na 50. Ọ na-enyekwa atụmatụ atụmatụ Arbitrage. Ihe ngwugwu a na-aga $ 41.5 kwa ọnwa mgbe a na-akwụ ụgwọ ya kwa afọ yana $ 49 mgbe a na-akwụ ụgwọ kwa ọnwa.
Ihe ngwugwu Dike
Nke a bụ ngwugwu kachasị ọnụ nke Cryptohopper na-enye. Ọnụọgụ kachasị nke ọnọdụ na-abawanye na 500, ọnụ ọgụgụ mkpụrụ ego na-abawanye ruo 75, ọnụọgụ nke ndị na-akpalite na-abawanye na 10, a na-enyekwa bot bot trading. Ihe ngwugwu a nwere ihe ndi dika ahia na ahia nke ndi ahia. Ihe ngwugwu a na-efu $ 83.25 kwa ọnwa mgbe a na-akwụ ụgwọ ya kwa afọ na $ 99 mgbe a na-akwụ ụgwọ kwa ọnwa. Ọnụahịa niile ewezuga ụtụ isi agbakwunyere.
Mbido Akaụntụ Cryptohopper
Enwere isi akụkọ abụọ ị nwere ike ịtọ na Cryptohopper. Nwere ike banye dị ka a ahia ma ọ bụ a n'ọma ahịa na-ere.
Edebere Cryptohopper ahịa
Nzọụkwụ mbụ ịkwesịrị ịme bụ ịga na weebụsaịtị. N'akụkụ aka nri nke weebụsaịtị ahụ, ị ​​ga-ahụ bọtịnụ edere Malite ikpe ikpe n'efu. I nwekwara ike pịa bọtịnụ Gbalịa ugbu a na homepage.
Anyị na-akwado ka ịmalite site na nnwale n'efu ma nwalee ikpo okwu. Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, ị kwesịrị ịdenye aha na ngwugwu ihe nyocha. Ga-aga n'ihu na-ewelite ngwungwu ka ị na-amatakwu ikpo okwu.
Mgbe ị gbasoro njikọ dị n'elu, a ga-akpọga gị na peeji nke egosiri n'okpuru. Na ibe a, ị ga-abanye ozi dị mkpa dị ka adreesị ozi-e, aha njirimara, aha gị, na paswọọdụ gị. Nke kachasị, anyị na-akwado ka ị gụọ ya usoro na ọnọdụ tupu ị gawa. Nwere ike ileghara ndenye aha akwụkwọ akụkọ. Ọzọkwa, anyị na-akwado ka ị debe paswọọdụ siri ike.
Mgbe inyocha adreesị ozi-e, ị nwere ike ịbanye na akaụntụ gị ebe a ga-ajụ gị iji mejupụta nkọwa gị na profaịlụ gị. Ihe nkọwa a ga - ajụ gị bụ: aha gị, adreesị gị, mba gị, ma ọ bụ akaụntụ azụmahịa ma ọ bụ nke onye ọ bụla, akara ekwentị gị, yana weebụsaịtị gị. Ọzọkwa, ị nwere nhọrọ nke ịtọ ntọala maka nyocha abụọ.
Na ibe a, ị nwekwara ike ịtọ ọkwa ị chọrọ ịnata, asụsụ ịchọrọ iji, eserese ịchọrọ iji, yana ma ịchọrọ ịbụ onye debanyere beta. Mgbe ị banyere nke mbụ, ị ga-enwe ngwa ọrụ gafere gị n'elu ikpo okwu niile.
Ogwe mkpuchi Cryptohopper
Nseta ihuenyo dị n'okpuru na-egosi gị dashboard Cryptohopper. Nke a ga-abụ ibe ị hụrụ oge ọbụla ị banyere.
Dashboard bụ ibe mbụ ị hụrụ mgbe ị banyere n’ime akaụntụ gị. Na dashboard, ị ga-ahụ iwu emeghe na otu ha si azụ ahịa. N'okpuru iwu emeghe, ị ga-ahụ nkọwa ndị ọzọ gbasara iwu ndị a. Ga-ahụ ọnọdụ ghere oghe, ọnọdụ dị mkpirikpi, na ego echekwara. N'okpuru ebe a, ị ga-ahụ nkọwa ndị ọzọ gbasara ọnọdụ ndị ahụ. Na nkenke, dashboard ga-enye gị nkọwa ndị ọzọ gbasara oghere na imechi.
Ubé n'okpuru dashboard taabụ n'aka ekpe gị bụ akụkọ ihe mere eme ahia. Nke a na-egosi gị ahịa niile ị debere ma mechie site na iji bot. Nke a ga - egosi gị ego, ụzọ ego, ụdị azụmaahịa, ego itinye ego, ọnụego, ego, na nsonaazụ azụmaahịa ahụ.
Mbadamba eserese ga-egosi gị eserese site na mgbanwe mgbanwe ị họọrọ. Nwere ike ịgbanwe mgbanwe na akụkụ aka nri nke elu nke eserese ahụ. Ihe atụ nke a gosiri n'okpuru.
N'okpuru taabụ chaatị bụ taabụ nyocha. Nke a bụ ebe ị na-akwado usoro gị iji hụ etu ha si dị irè. E gosipụtara taabụ backtesting n'okpuru.
Ubé dị n'okpuru taabụ azụ azụ bụ atụmatụ. Nke a bụ ebe ị mepụtara usoro nke gị. Ọ bụkwa ebe ị ga-edebe usoro ndị ị na-ebudata site n'ọma ahịa.
Ahịa ahịa na-enye gị ohere ịzụta algọridim na ahịa. N'ikpeazụ, peeji nke ngwa ahụ na-ahapụ gị ijikọ Cryptohopper na ngwa ndị ọzọ dị na mpụga dịka TradingView, Zapier, na Autosync.
Otu esi abuo onye na ere ahia Cryptohopper
Ndị na-ere Cryptohopper na-arụ ọrụ dị mkpa na gburugburu ebe obibi niile. Nke a bụ n'ihi na ha mepụtara ngwaọrụ ndị ọrụ nwere ike ịzụta ma jiri zụọ ahịa. Companylọ ọrụ ahụ gosipụtara ikpo okwu n'ahịa n'oge ihe omume 2019 CES na United States. E nwere ọtụtụ narị ngwaọrụ dị n'ọma ahịa ma ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-egosi na ha na-akpata ezigbo ego. Ọmụmaatụ, Strategy Nakamoto nwere akụrụngwa akpọrọ MTA Bear nke na-aga $ 50. Dika edere ya, ngwa a nwere nyocha 1490. Nke a pụtara na o meela ihe karịrị $ 75k na ngwa ahụ.
Iji ghọọ onye na-ere ere, ịkwesịrị ịgbaso a njikọ ma tinye. Na ngwa gị, ụlọ ọrụ ahụ ga-ajụ gị ọtụtụ ajụjụ. Usoro a na-esikarị ike ma na-agwụ ike n'ihi na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ inweta ọtụtụ ozi gbasara gị dị ka o kwere mee. Ọ chọrọ iji hụ na ị na-enye ndị ahịa ngwá ọrụ kachasị mma. Ozugbo a kwadoro gị, ịnwere ike bulite algọridim gị wee bido ịkpata ego.
Nhọrọ ịkwụ ụgwọ Cryptohopper
Cryptohopper na-anabata ọtụtụ nhọrọ ịkwụ ụgwọ. Ọ na-anabata debit na kaadị akwụmụgwọ, obere akpa dị ka Skrill na PayPal, yana cryptocurrencies dị ka Bitcoin, Monero, Ripple, ZCash, Litecoin, na Dash. Ọnụ ego kacha nta ị nwere ike ịmalite ịzụ ahịa bụ euro 20. Otú ọ dị, iji belata ihe ize ndụ, na ụlọ ọrụ na-atụ aro na ị na-amalite na ihe 300 euro.
Nlekọta Ndị Ahịa Cryptohopper
Cryptohopper mere ọtụtụ ihe iji hụ na azara ndị ahịa ajụjụ. Companylọ ọrụ ahụ etinyela ebe zuru ezu na-ajụkarị ajụjụ peeji nke na-aza ọtụtụ ajụjụ a na-ajụkarị. Companylọ ọrụ ahụ nwekwara kọntaktị page nke nwere ụdị ebe ndị ọrụ nwere ike izipu ajụjụ. Na mgbakwunye na nke a niile, ụlọ ọrụ ahụ nwere ibe mgbasa ozi mmekọrịta ebe ndị ọrụ nwere ike izipu ajụjụ.
Ihe nkpu Facebook
Ihe nkpu Twitter
Ihe nkpu Instagram
Ihe nkpu android ngwa
Ihe nkpu iOS ngwa
Cryptohopper bụ ụlọ ọrụ edebanyere aha na Netherlands. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ anaghị achịkwa ego ọ bụla. Nke a bụ n'ihi na ọ chọghị ka edozie ya ebe ọ bụ na ọ naghị enye ọrụ ọrụ ọ bụla.
Cryptohopper bụ otu n'ime ụlọ ọrụ fintech na-eto ngwa ngwa n'ụwa. Ndị mmepe mepụtara web na ekwentị mkpanaaka kensinammuo nke nyere ndị ahịa ụwa aka ime ka ego na-azụ ahịa cryptocurrencies. Ikpo okwu na-enyere ndị mmadụ aka na enweghị ahụmịhe n'ahịa ka ha sonye ma nweta nnwere onwe ego. Agbanyeghị, achọrọ ndị ọrụ ka ha rụọ ọtụtụ ọrụ tupu ha ejiri ya na ezigbo ahịa. Ha kwesiri itughari usoro a nwa oge. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ emeela ikpo okwu nke na-enye ndị ahịa ikike ire akara ha na ndị ahịa ụwa.